C/casiis Xildhibaan “Cidna Isma Weydiineyso Sida Gaadiidkii Is Qarxiyey Ku Yimaadeen Otto Otto” – Goobjoog News
Afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda federaalka Soomaaaliya C/casii Xildhibaan ayaa si kulul uga hadlay qaraxyadii maalin ka hor ka dhacay xarunta wasaaradda Otto Otto ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan ayaa ugu horreyn sheegay in aanay jirin cid maanta ka xanuunsan dhacdadii 14-kii October, sidoo kalena aan lasii xusuusan.
Waxa uu sheegay in suurtagal ahayn in dowladda federaalka ee uu ka tirsan yahay shacabka u sheegto in la isla xisaabtamo, waxna aan la iska weydiin sida ay suurtagal ku noqotay gaadiidkii is qarxiyey sida ay ugu dhowaadeen Otto Otto.
Sidoo kale, Xildhibaan ayaa sheegay in isaga uu muddo 11 bil yahay Afhayeenka wasaaradda amniga gudaha, hadane aanu qaadan wax mushaar ah.
Waddooyinka Gaalkacyo Qaarkood Oo La Dayactirayo